Banyere Anyị - Hebei Sunshow Lubricanting Oil Tech.Co., Ltd.
E guzobere Hebei Sunshow Group na Septemba 2013. Isi ụlọ ọrụ ahụ dị na District Congtai, Handan City, Province Hebei, China. Otu a nwere ulo oru dika Yongnian Factory, Jize Factory, Xingtai Factory, Yongnian Office, Xingtai Office, Handan Operation Center na ndi otu ndi ozo.
Ndị otu ahụ nwere ụlọ ọrụ pụrụ iche maka imepụta ezigbo mmanu, griiz, nkenke ngwụcha dị elu, akụrụngwa ngwaike na eriri injinia, yana ụlọ ọrụ na mbubata na mbubata ahia na nke mba ọzọ. Otu ndi otu a bu ihe ndi edere n'elu, nke a na-ejikarita ma na-enye ndi oru ahia aka dika ulo oru, imeputa ihe na ulo.
Kemgbe nguzobe ya, anyị agbasoro nzube ụlọ ọrụ nke "ịmepụta akara mbụ na ndị ahịa afọ ojuju". Companylọ ọrụ anyị na-ewebata teknụzụ nrụpụta dị ogologo oge, na-ekwusi ike na nkà ihe ọmụma azụmaahịa nke lanarị site na mma na mmepe site na aha, na-elekwasị anya na ngwaahịa na uru bara uru. Ugboro abụọ, na-agbaso ozi ụlọ ọrụ nke "ịmepụta uru maka ndị ahịa na ịmepụta uru maka ọha mmadụ", na-enwe ọganihu ma bụrụ onye ndu na ụlọ ọrụ ndị metụtara ya.
N'ọdịnihu, Hebei Sunshow ga-anọgide na-agbasi mbọ ike ka ọ bụrụ onye a pụrụ ịtụkwasị obi zuru ụwa ọnụ maka ndị ahịa, ka anyị dee atụmatụ mara mma ọnụ!
Nyocha na mmepụta
Companylọ ọrụ anyị ewebatala mmepụta teknụzụ nke akara mmanụ na-ebu ụzọ na-arụ ọrụ, ma na-agbaso usoro ihe ọmụma azụmahịa nke ịchọ nlanarị site na ịdị mma na mmepe site na aha, na-emeziwanye ngwaahịa na ọrụ.
Ngalaba zuru ezu
Mmanụ mmanụ, griiz, mmanụ pụrụ iche, mmanụ mmanụ dizel, mmanụ gia, mmanụ haịdrọlik, mmanụ nnyefe mmanụ, mmanụ akụrụngwa, mmanụ ikuku ikuku, mmanụ ụgbọ mmiri na-eduzi, mmanụ mgbanwe, mmanụ mmanụ na-egbu mmanụ, mmanụ emulsion, mmanụ mbufe ọkụ, mmanụ isi oyi , mmanụ nchara mgbochi, mmanụ mmanụ ikpuru na mmanụ mgbapụta agụụ
Ejiri ọtụtụ ebe.
Ngwa ubi nke ngwaahịa: ụlọ ọrụ, ụlọ ọrụ dị arọ, ngwa ụgbọ mmiri, mines, ubi mmanụ, igwe ihe owuwu na ngwa ndị ọzọ buru ibu na akụrụngwa ọgwụ, ụlọ ọrụ textile, akụrụngwa ahụike na mpaghara ndị ọzọ.
Companylọ ọrụ anyị enwetara asambodo asambodo ISO 9001, nwere akara akara ụghalaahịa nke Sunshow, yana ọtụtụ ngwaahịa ikikere na ngwugwu nkwakọ ngwaahịa.
Factory, R&D na mmepụta ìgwè
E nwere ụlọ ọrụ 3 ugbu a, gụnyere mmepụta, nhazi, nkwakọ ngwaahịa na nchekwa nke mmanụ na-ete mmanụ na ngwaahịa griiz. Ndi oru teknụzụ dị ugbu a na ndị ọrụ mmepe na ndị nwere ihe karịrị mmadụ iri atọ na ndị ahịa nwere ihe karịrị mmadụ iri ise
Adreesị Companylọ Ọrụ: Ianlọ Tianqin, District Congtai, Handan City, Province Hebei, China
Adreesị ụlọ ọrụ: Mpaghara Yongnian / Jize County, Handan City, Province Hebei.